I-Opinion: Impembelelo emangalisayo yale nkqubo yezinto ezizenzekelayo kunye ne-hyaluronic acid sinokucebisa ukuba sizenzele onke amabhinqa. Ngokukodwa evekeni nasemveni kweeholide, xa isikhumba sethu sidinga ukunakekelwa okhethekileyo. Kodwa ngaphambi kokuba sicebise ukuqonda ukuba yeyiphi imiphumo kunye neenkqubo zokuzicoca nge-hyaluronic acid zichazwe.
Ucinga ntoni, yintoni isiqinisekiso sobutsha kunye nobuhle besikhumba? Eqinisile, kwi-moisturizing! Yaye yintoni umthombo oyintloko wokumisa? I-Hyaluronic acid (HA)! Le nxalenye yeekhemikhali, inxalenye yesikhumba, lixesha lokucula iingoma. Igcina elukhumbeni kunomswakama obuninzi kangangokuba izihlandlo ezingama-6000 ubukhulu bayo. Ewe, kwaye kuncitshiswe ukukhuphuka kwesi sikhuphule kwesikhumba! Ekugqibeleni, ikhusela ulusu kwiintsholongwane kwaye isebenza umsebenzi weeseli.
I-Alas, ngokudala, inani le-hyaluronic acid liyancipha, okwenza ukuba ulusu lulahlekelwe yithethoni, luqala ukubola kwaye lube lukhuni. "Awukwazi yini ukuzalisa ivenkile ye-asidi esikhumbeni sakho?" - ucela. Ingxaki kukuba i-molecule ze-HA zinkulu kakhulu ukuba zingene ngaphakathi kwesikhumba. Ngaphambili, kwalawulwa kuphela ngoncedo lweejoke. Kwaye iisandululwazi zakutshanje nje kwii-laboratories ze-Forlle zakwazi ukunciphisa ama-molecule e-asidi ukuya kuma-nanomimeters ama-5, ngenxa yokuchithwa kwe-laser (ngenxa yaloo mveliso bafumana umvuzo weNobel). Ngoko ke, onke amalungiselelo kunye neenkqubo zokucoca nge-hyaluronic acid ye-"Platinum ukunakekelwa kwezonyusa" ziqulethe ukubunjwa kwalo "olutsha" lwe-hyaluronic acid!
Ingqungquthela ye sibini yeenkqubo zokucoca kunye ne-hyaluronic acid kunye nolwazi olubanzi lwehlabathi jikelele lenkampani i-platinum e-ionized, ubukhulu bezinto ezincinci kunezona nanoparticles! Kodwa i-platinum inefuthe elinamandla lokulwa ne-antioxidant - lisusa i-oksijeni esebenzayo kwesikhumba (i-free radical). I-latter, eyenziwe phantsi kwefuthe le-ultraviolet kunye noxinzelelo, intshabalalisa i-collagen kunye ne-acaluronic acid, eyenza i-freckles, amabala amnyama, imibimbi kunye nokwenza ulusu lube lumile, lukhuni kwaye lube lukhulu. Kwaye ekubeni "ukunakekelwa kwePlatinum" kubandakanya iindlela eziqukethe iplatinum, ithetha ukuba ikhusela isikhumba kwiinkathazo ezibalwe.
Ewe, ngoku malunga nenkqubo ngokwayo. Kwaqala ngokuhlanjululwa kwesikhumba nge-emulsion emnene engacasuliyo nesikhumba esona sikhulu. Ngaphezulu kwesikhumba sakhe senza isikhumba sam siphunga esilungileyo esiphendula nge-emulsion kwaye sihlambulule ngokucacileyo isikhumba. I-lotion ehlambulukileyo yokuhlanjululwa, enceda ukugcina ingubo yamanzi yesikhumba, yagqitywa.
Ukuqhubela phambili i-cosmetian ifihlile isikhumba nge-lotion edibanisayo equkethe i-hyaluronic acid ephezulu, kwaye ichazile ukuba ukuba kule nqanaba ukwenza ionophoresis, i-asidi iya kungenela kalukhuni ngakumbi kwaye umphumo wokushiya uya kukhulisa. ULuyudmila olandelayo wasebenzisa i-platinum serum, apho (cinga nje!) Ubuninzi beplatinum, ingxube ephezulu ye-HA kunye nobukhulu bezinto ezilandelwayo.
I-serum yayilandelwa enye i-lotion, i-platinum. Yena, njengomqhubi, ukhulula yonke into encedisayo elukhumbeni. Ngokutsho kwakhe, i-beautician yenza i-lymphatic drainage kunye ne-acupressure shiatsu, waza wambesa ubuso bakhe nge-mask platinum. Kwimizuzu engama-20 umaski wakwazi ukuzalisa ulusu ngeplatinum kunye nefuthe eliphakamileyo eliphakamileyo, kwaye ndade ndifumana ithuba lokuphupha okufutshane malunga neeholide ezayo.
Ekupheleni kweenkqubo zezonyango kunye ne-hyaluronic acid, i-cosmetologist isetyenzisile ukhenkco omnene ukondla, osebenza njengomkhuseleko kummandla wangaphandle. Mna, ndichukumisa ubuso bam, ndamangaliswa: luhlobo olunjani lobunanzi nolushushu lwaba lukhulu!
Iingcamango: xa ufumene ukuba izimonyo zodumo oludumile lwase-Australia eSodashi zaziswa eUkraine, zikhawuleza kule salon. Igama lomtsalane, eliyaziwayo kwihlabathi le-SPA, liguqulelwa lisuka kwisiSanskrit ngokuthi "ukunyameka, ukuhlanzeka, ukukhanya". Yaye yile ngongoma. I-Cosmetics i-Sodashi iqulethe izithako zendalo kuphela: iitswitshi zezityalo, amaminerali olwandle, ii-vithamini, udongwe, kunye ne-ecocekileyo, ioli efunekayo yesundu, itiye kunye ne-sandalwood. Izithako zendalo (amafutha kunye nokucoca kwiimbewu zamagilebhisi) zisetyenziselwa nokuba zigcinwe. Akumangalisi ukuba oku "ziphila" izimonyo zigcinwe kwiibhotile zeglasi emnyama.
"Gqibezela ukuphumla kunye nobunye kunye nendalo," - wathembisa incwadana evela kwilizwekazi elikude. Kwaye, cinga, ukusuka kwimimiselo yokuqala yenkqubo, ndaza ndahlala kulo "ubunye" obumnandi.
Yonke yaqala ngento yokuba i-cosmetologist ayizange ibhekane nobuso bam, kodwa nge ... inyawo. Kuba ngokweemfundiso zamandulo, ukuphumula kuqale ngokuthe ngqo nale nxalenye yomzimba. Kwaye kuyinyani, ngokukhawuleza ukuba enxibe iinyawo zam ngendwangu efudumeleyo, engxininise ekujongeni kunye nejojoba, i-lavender kunye neoli yeoli, "ndancwina" ngomsinga ococekileyo kunye nokuphumla okunandileyo kwandile yonke umzimba wam. Kodwa le nto yayingowokuqala "inqaku" kwi-symphony yeziqholo kunye neentlungu.
Ukuqhubela phambili i-cosmetian ifikile ekhaleni lam entendeni ngesangxube samafutha we-mandarin, i-jasmin kunye ne-vanilla, ekucelile ukuba avuselele kathathu. Kwaye emva kokukhanya koko, ukuhamba okuhambayo kwaqala ukuhlambuluka kwesikhumba sam: amehlo ami - i-extract of chamomile, nentamo, intamo kunye nobuso - ngeoli ze-sandalwood, i-lime kunye ne-lavender. Le mali yayibonakala ilula ngaphezu kobuhlungu. Nangona kunjalo, benza umsebenzi wabo: bahlambulule, bazincwina baze bawunqanda isikhumba.
Emva kokuba i-beautician ibeke icompress efudumele ngokubuyisela ingqalelo entanyeni, ubuso kunye nobuso. Ukuyibeka ngokukhawuleza kwaye ngokucokisekileyo, njengamapalesi e-lotus, ekukhanyeni kwakubonakala kum umfundisikazi okwenza isithethe esingaqondakaliyo. Xa isithethe senziwa kathathu, kulandelwa enye ukuhlanjululwa, ilandelwa enye i-compress kunye nezinye iziqhumiso-inhalation, ngeli xesha kunye needrapefruit, juniper kunye ne-cypress. Ndaphefumula kathathu, kwaye ndandiva ngathi i-shiver igijima emzimbeni wam.
Okwangoku, i "symphony" yafikelela kwi "crescendo" - ukuhlalisa. Yenziwe ngocino lwe-massage kunye ne-macadamia kunye nama-almond amnandi kunye nokwakhiwa kokuhlaziywa kwee-avocado, i-apricot kernels kunye ne-sandalwood. Njengoko kwagqitywa kamva, ukuxilisa kwadlula imizuzu engama-20 kwaye iphelile ngeempawu zokungapheliyo ezenziwe ngebunzi ebunzini lam kunye ne-decollete. Kodwa andizange ndiqaphele ixesha, andizange ndicinge ngezenzo. Ndabona ukudansa kwamaflamingo!
Ukuxilwa kwalandelwa enye i-compress "kathathu". Kwaye emva kwam ngaphantsi kwamehlo kwakusetyenziselwa ukuphakamisa ukhilimu, kunye nakubuso - imaski engabonakaliyo evuselela isikhumba aze abuyisele ubuciko. Ukuqhubela ngaphantsi kwamehlo kunye nemilomo - ukhilimu othungayo okanye omanzi, ebusweni - okunomsoco. Kwaye ekugqibeleni ndandifake "iiglasi ezimhlophe" (bafaka i-compressors ngeoli ye-rose), banikela enye ingoma nge-orange kunye ne-bergamot. Kwaye kwenziwa njengento yokugqibela yokuxilwa kwentloko.
Indlela yokwenza umhle, utyani?
Yintoni eyingozi kwi-vitamin deficiency kwisondlo sokutya
Ukusetyenziswa kweoli yamnyama
Cottage shies curd
Ukukwazi abantwana abanezilwanyana zasendle nezifuywayo
Yintoni abafazi abacinga ngayo ngamadoda
Ngokuthandana nomntu owaziwayo - uAlexander Herzen
U-Ksenia Sobchak uthelekisa nentombazana eneentloko ezisikiweyo
Ukukhwabanisa i-Fat: izizathu zokubonakala kunye nokonyango ekhaya
Ubundlobongela ngexesha lokuya esikhathini: i-pros and cons